Wasiirka caafimaadka Puntland oo ka warbixiyey safar dibadda ah oo uu ka soo laabtay. – Radio Daljir
Wasiirka caafimaadka Puntland oo ka warbixiyey safar dibadda ah oo uu ka soo laabtay.
Galkacyo, Sept 30 – Wasiirka caafimaadka ee dawladda Puntland Dr. Bashiir Cali Biixi, oo in muddo ah ku maqnaa safar dalka dibaddiisa ah ayaa maanta ka warbixiyey socdaalkiisii muddada bisha ka badan uu ku maqnaa.
Wasiirka oo shalay ku soo laabtay magaalada Galkacyo oo uu markii hore ka anbabaxay, ayaa maanta nagu soo booqday Istuudyaha Daljir ee magaalada Galkacyo, waxaana uu faah-faahin dheeraad ah ka bixiyey shir ka dhacay magaalada Nairobi kaasi oo ay qabatay hay?adda QM u qaabilsan dhinaca caafimaadka ee WHO, laguna casumay wasiirrada caafimaadka ee maamullada Puntland, Somaliland iyo midka dawladda FKM ah ee Soomaaliya iyo sidoo kala isla agaasimayaasha guud ee wasaaradahaas.
Wasiirku waxaa uu sheegay shirkaasi in uu ahaa mid diiradda lagu saarayey dajinta qorshayaasha caafimaad ee looga baahan-yahay maamullada wasiirradooda la casumay ee Soomaaliya ka jira, iyo Hay?adda WHO in ay isla jaan-gooyaan habkii loo maarayn-lahaa labada sano ee soo socota.
Shirkaan oo ah mid labadii sanaba ay mar wada-yeeshaan maamullada Soomaaliya ka jira iyo hay?adda WHO, ayaa sanadkaan dwladda Puntland horgaysay qorshayaal cusub oo lagu dar-dar galinayo caafimaadka Puntland, iyadoo sidoo kalana wasiirku uu oo goobtaasi ka jeediyey wixii Puntland u qabsoomay labadii sano ee la soo dhaafay.
Dr. Biixi, wuxuu sheegay in uu jiray gaabis aad u weyn oo ku yimid qorshihii labadii sano la soo dhaafay la dajiyey ee ay sidaan oo kale u wada galeen hay?adda caafimaadka adduunka, iyo maamullada Soomaalidu wuxuuna si gaar ah u xusay wasiirku, Puntland oo uu sheegay 40% in aysan ka fulin shaqooyinkii looga baahnaa, xilligaasi oo ahaa markii uu Puntland m/weynaha ka ahaa Gen. Cadde Muuse Xirsi.
Md. Biixi, hadda waxaa uu isku diyaarinayaa safar kale oo dalka dibaddiisa ah kaasi oo oo ku wajahan dalka Marooko, waxaana uu ka qayb-gali doonaan shir halkaasi ka dhii-doona oo ay iskugu imaanayaan dawladaha Islaamku.
Shirkaan oo ah midkii 56-aad oo ay yeeshaan 22 dawladood ee Islaamka ahi, ayaa idaacadda Daljir waydiisay wasiir Biixi, qorshaha iyo qodobbada Puntland ahaan uu hor-dhigi doono madaxda Islaamka ee shirkaasi imaanaysa, waxaana uu sheegay in uu hor-gayn doono shirkaasi Qodobbo aad u muhiim ah oo ku saabsan xaaladda Puntland, wuxuuna si gaar ah u xusay in uu diiradda saari-doono waxqabad la?aanta labadii sano ee ugu danbeysay marka la fiiriyo gacantii looga baahnaa dunida gaar ahaan kuwa islaamka.
Dhanka kalana wasiirku waxaa uu maanta booqday qaarka dugsiyada waxbarashada ee magaalada Galkacyo, gaar ahan dugsiyada Cumar Samatar, Xaaji Cali Biixi, Yamayska iyo iskuulka ummadda, waxaana uu maamulka, macallinmiinta iyo ardadayba u soo jeediyey hadallo dhiiro-galin ah oo ku saabsan ahmiyadda waxbarashada.
Dugsiyada uu wasiirku booqday waxaa ka mid ah iskuulka Xaaji Cali Biixi, oo uu sheegay in uu yahay iskuulkii ugu horreeyey ee uu waxbarshadiisa ka bilaabay, sanaddii lixdamaadkii.
Wasiirka oo noogu warramay Istuudyaha Daljir ee magaalada Galkacyo, ugu danbayntii waxaa uu dhammaan bulshada reer Puntland u soo jeediyey in ay ku dadaalaan nadaafadda iyo bilicda magaalooyinka, xilligaan oo lagu jiro xilli roobaadkii dayrta sidaas darteena ay lagama maar-maan tahay in lala dagaallamo qashinka si aan cudurro uga dillaacin, waxaana uu si gaar ah arrintaas ku faray in ay fuliyaan maamullada D/hoose iyo shaqaalaha wasaaraddiisa caafimaadka.
C/fitaax Cumar Geedd?